Arday ku nool Dhadhaab oo helay deeq Waxbarasho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Arday ku nool Dhadhaab oo helay deeq Waxbarasho
A warsame 27 March 2015 27 March 2015
Mareeg.com: Hay’adda DRC ee dalka Denmark ayaa deeq waxbarasho siisay 125 arday oo ka qalin jabisay dugsiyada sare ee ku yaalla xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya.
Ardayda oo ka kooban wiilal iyo gabdho ayaa wax ka baran doona jaamacadaha ku yaalla isla dalka Kenya.
Guddoomiyaha dhallinyarada xerada qaxootiga Xagardheer, Abshiro Xasan Cumar ayaa sheegtay in deeqdu aysan dabooli Karin baahida waxbarasho ee ka jirta xeryaha Dhadhaab.
Hay’adaha samafalka ee ka hawlgala xeryaha ayay ka codsatay inay deeq waxbarasho iyo tababarro u fidiyaan ardayda ka baxday dugsiyada sare ee qaxootiga ee aan awoodin inay sii wataan waxbarashada.
Waxay tilmaantay inuu halis ku jiro mustaqbalka ardayda ka baxda dugsiyada waxbarasho ee xeryahaas, ayna u baahan yihiin deeq waxbarasho iyo tababarro u sahli kara inay yeeshaan xirfado ay ku maareeyaan noloshooda.
Ardayda heshay deeqda waxbarasho ayaa u mahadcelisay hay’adda ay ka heleen ee DRC.
Madaxweynaha Yemen oo ku sugan Sacuudi Carabiya
Shan dal oo dhulka & badda ka weeraraya Xuuthiyiinta